Zimbabwe imposes 14 day mandatory quarantine, even for returning citizens - Opera News
Zimbabwe imposes 14 day mandatory quarantine
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa has imposed a 14-day mandatory quarantine of all travelers entering the southern African nation including returning residents. This comes with the discovery of the new Covid-19 variant and the hope is to try and halt the spread of the omicron in Zimbabwe.
“All returning residents and visitors have to undergo PCR testing, and will be quarantined at own cost, for days recommended by WHO, even if they present negative PCR test results from elsewhere,” Mnangagwa said in televised address on the state broadcaster on Tuesday 30 November.
Zimbabwe has not yet detected the omicron variant and with the holiday season fast approaching, it is only a matter of time before it hits the nation. With many of its citizens living in neighbouring country South Africa that disclosed detection of the new variant on November 25th, Zimbabwe should prepare for the new variant.
Zimbabwe is among several countries from the southern African region facing travel bans by Western countries including the U.S. and U.K. Some International airlines including Qatar and Emirates have also halted flights to the country and this will remain so for the foreseeable future.
Emmerson Mnangagwa South Africa WHO Zimbabwe Zimbabwean